Ukungasebenzisi Isipiliyoni Somuntu Siqu Kuyakulimaza | Martech Zone
Ukungasebenzisi Isipiliyoni Somuntu Umuntu Kuyakulimaza
NgoLwesine, Juni 18, 2015 NgeSonto, ngoJuni 21, i-2015 Douglas Karr
Ku-IRCE yakulo nyaka eChicago, ngabuza UDavid Brussin, umsunguli weMonetate, futhi kube yingxoxo ekhanyisayo ekulindeni okuguqukayo kwabathengi kanye nolwazi abalulindele kubathengisi abaku-inthanethi nabangaphandle. Icala lokwenza ngezifiso likhula ngamandla futhi kungenzeka ukuthi selivele lifinyelele eqophelweni elithile.
Okwamuva kweMonetate Umbiko wekota we-Ecommerce kukhombisa ukuthi amazinga e-bounce anyukile, amanani we-oda asezingeni aphansi namazinga okuguqula aqhubeka nokwehla. Ukwenza ngezifiso nokuhlola kuphazamisa lo mkhuba… hhayi nje ngenxa yezincomo ezithuthukisiwe kepha ngoba amasayithi asebenzisa lobu buchwepheshe athola futhi agcina amakhasimende ngenxa yesipiliyoni samakhasimende esithuthukisiwe.
Umbiko we-Ecommerce Quarterly uhlaziya isampula engahleliwe yezipiliyoni zokuthenga eziku-inthanethi ezingaphezu kwezigidigidi eziyisikhombisa kusetshenziswa isitolo esifanayo idatha kuyo yonke ikota yekhalenda. Izilinganiso kuwo wonke umbiko zibalwa kusampula yonke. Izinkomba zokusebenza ezisemqoka, njengevelu ejwayelekile ye-oda nezinga lokuguqulwa, ziyahluka ngomkhakha nohlobo lwemakethe. Lezi zilinganiso zishicilelwa kuphela ukuxhasa ukuhlaziywa ekukhishweni ngakunye kombiko, futhi akuhloselwe ukuba kube yizilinganiso zebhizinisi le-ecommerce.
Isimali inika amandla ukwenza ngezifiso iziteshi eziningi. Isixhumi esibonakalayo seMonetate Platform sivumela abathengisi ukuthi bakhe, bahlole futhi basebenzise inani elingenamkhawulo lokuhlangenwe nakho okwenziwe ngezifiso kwedijithali okunesidingo esilinganiselwe se-IT noma izinsiza zokubonisana kungxenyekazi yesikhathi sangempela.
I-Monetate ye-imeyili - Yenza i-imeyili yakho ibe ngeyakho bese uyixhumanisa namakhasi wokufika owenziwe ngezifiso.
I-Monetate Yokuthengiselana - Izincomo zomkhiqizo womuntu siqu nokubhejiwa.
I-Monetate yezinhlelo zokusebenza zeselula - Ukwenza ngezifiso nokuhlolwa kwezinhlelo zokusebenza zomdabu zeselula.
Ukwenza ngezifiso kweMonetate nezincomo
With I-Monetate yokwenza ngezifiso, ungakha okuhlangenwe nakho kwamakhasimende okwenzelwe kuwebhu yonkana, i-imeyili, nezinhlelo zokusebenza zeselula. Uyakwazi ukwenza ngezifiso lonke ulwazi lokuthenga ngokwenza ngezifiso izimpahla zokuzulazula, amabhanela, amabheji, amaqhawe, nokuningi. Izakhi zedatha zingahlanganiswa kusuka ku-CRM yakho ne-POS kanye newebhu, indawo, indlela yokuziphatha nedatha yedivayisi ukuthuthukisa umuzwa wamakhasimende kusayithi lakho lonke.
I-ROI yokwenza ngezifiso
Ngezinselelo zemakethe ekhula njalo e-inthanethi nokuncintisana, ukwenza ngezifiso akukona nje ukunikeza imbuyiselo kutshalo-mali, kuba yisidingo.
I-Kipling usanda kukhipha igridi yokuncoma komkhiqizo ekhasini layo eliyisiqalo ngeMonetate. Yize yayisisekelo futhi uqobo lwayo, inkampani yathatha elinye igxathu ngokuhlola ukubekwa. Uhlobo olulodwa lubonise izincomo zomkhiqizo phezulu ekhasini ngenkathi enye inguqulo ibonise igridi ezansi kwekhasi. Ngenxa yalokhu, iqembu lenyusa ukuzibandakanya kwabathengi futhi lazimisela ukubekwa okuhle kakhulu kokuthuthukisa izinga lokuguqulwa.
Ngamanani okuguqulwa kwamaphesenti ayi-7.29 namaphesenti angama-9.33 ngokulandelana, womabili aledlula kakhulu izinga lokuguqulwa eliyisisekelo lesiza lamaphesenti angu-1.64.
Tags: uDavid brussinokuqukethwe okunamandlai-imeyili nokwenza kahleukwenza ngezifiso i-imeyiliukufunda imishiniimaliukuthuthukisaukuzenzelaizincomo zomkhiqizonokwenza indawoukuhlolwa kwesizaukukhomba
Ukuthengisa Nokumaketha: Umdlalo Wangempela Wezihlalo Zobukhosi